Baaskiilada korantada ugu fiican, sidee u shaqeeyaan? | War gadget
Qolka Ignatius | | qalabka
Baaskiilada korontada waxay noqotay bedel sax ah oo shaqeynaya in muddo ah hadaan ku noolahay magaalo ay baabuurta gawaarida walaac ka muujinayaan. Waad ku mahadsantahay habkan gaadiidka nadiifka ah, kaliya ma jimicsi laakiin waxaan sidoo kale iska ilaalinaa wasakheynta, marka lagu daro yareynta waqtiga ay nagu qaadato inaan dhaqaaqno. Waxay sidoo kale noo oggolaaneysaa inaan dhigno ficil ahaan meel kasta, annaga oo aan ka walwalin baarkinka, aagga buluugga ah iyo kuwa kale wakhti kasta.
Celcelis ahaan xawaaraha ay baaskiillada korontada ku socon karaan Waa inta udhaxeysa 25 iyo 30 km / saacaddii, oo u dhexeysa 60 ilaa 80 km iyadoo kuxiran qaabka, culeyska isticmaalaha iyo nooca wadada aan safreyno (isku mid maaha in lagu wareego dhul fidsan marka loo fiiriyo dhul ka buuxo ama hoos u dhac ah). Qodobkaan waxaan ku tusi doonaa baaskiilada korantada ugu fiican kuwaas oo daboolaya baahiyo iyo dhadhamin ballaaran.
Kahor iibsashada baaskiil koronto ku shaqeeya waa inaad caddeysaa waxa uu yahay iyo waxa uusan ahayn. Baaskiiladaha korantada waxay u baahan yihiin baaldeggeenna si mootadu u shaqeyso, maadaama ay kaaliye ahaan ugu shaqeyneyso baaskiilka. Baaskiil noocan ah uma baahna wax ogolaansho ah oo lagu faafiyo. Si kastaba ha noqotee, haddii aan ka hadalno mootooyinka korantada, waxyaabo badan ayaa isbedelaya, maaddaama aan nafteena ku aragno mootada ka shaqeysa korontada oo keliya, sidaas darteed waxay la xiriirtaa qandaraas qaadashada qandaraaska iyo liisanka u dhigma ee lagu wado.
1 Sidee baaskiilada korontada u shaqeeyaan
2 Qodobbada la tixgelinayo marka la iibsanayo baaskiil koronto ku shaqeeya
2.1 Wax soosaarka / Miisaanka
2.2 Nolosha Batariga / Waqtiga Bixinta
2.4 Soo saaraha
3 Baaskiilada korantada ee u dhexeeya 500 iyo 1000 euro
3.1 Sunray 200 - Baaskiil dalxiis koronto ku socda
3.2 Moma - SHIMANO baaskiil dalxiis koronto - 26 «
3.3 Moma - SHIMANO Baaskiil Baaskiil koronto - 20 «
3.4 Teamyy 26 Inch Laabista Baaskiil Koronto
4 Baaskiilada korantada ee u dhexeeya 1000 iyo 2000 euro
4.1 Cruiser - SHIMANO Baaskiil koronto - 26 «
4.2 Baaskiilka korantada ee korantada ee loo yaqaan IC Electric
4.3 Baaskiilka korantada ee korantada IC Electric
5 Baaskiilada korontada laga bilaabo 2000 euro
5.1 Takhasus gaar ah Turbo Levo FSR
5.2 Shirkadda Brompton Electric
Sidee baaskiilada korontada u shaqeeyaan
Baaskiilada korantada waxaa loo tixgeliyaa kuwa ka shaqeeya laba nooc oo shucuur ah: ku lugeynta iyo mahadnaqa taageerada mishiinka korantada oo ku bilaabmaya hadba baahida aan u qabno markaan baaskiil wadno oo istaagi doono markaan joojinno sameynta. Nidaamkan qalliinka waxaa loogu yeeraa gacan ka geysashada, nidaam aan ku hirgelin karno baaskiillada kale mahadsanid xirmooyinka si gooni ah loo iibiyay.
Awoodda ugu badan ee baaskiilada korantada waa 250 W, inkasta oo mararka qaar ay gaari karaan ilaa 350 W xawaarehooduna ugu badan yahay 25 km / saacaddii. Baaskiillada sheeganaya in loogu yeero koronto ee leh 500 W awood waxay ku dhacaan qaybta mootooyinka korantada, sidaas darteed waxay ku dhacaan banaanka qaybtaan.
Qodobbada la tixgelinayo marka la iibsanayo baaskiil koronto ku shaqeeya
Xigasho: Flickr - Matt Hill
Wax soosaarka / Miisaanka
In kasta oo soosaarayaasha intooda badani ay u adeegsadaan aluminium samaynta jiiska baaskiiladaha korontada, waxaan sidoo kale heli karnaa moodello ka samaysan bir. Waxay kuxirantahay faa'iidooyinka ay soo bandhigaan nooc kasta, waa inaan tixgalino culeyska, maadaama aan ku darsano kuweena waxay saameyn ku yeelan doontaa ismaamulka ay na siin doonto.
Nolosha Batariga / Waqtiga Bixinta
Nolosha batterigu waxay ahayd, tahay, oo ay sii ahaan doontaa lambarka koowaad ee qalab kasta oo koronto ku shaqeeya. Waxay kuxirantahay baahida ama isticmaalka aan qorsheyneyno inaan siino baaskiilka, waa inaan tixgalino waqtiga lacag bixinta. Suuqa waxaan ka heli karnaa leedhka, lithium ion iyo baytariyada nikkel nickel. Mid walbana wuxuu na siiyaa waqti lacag bixin oo kala duwan, waqti si cad uguxiran awoodiisa.
Haddii aan dooneyno inaan u isticmaalno baaskiil koronto inta badan inaan u aadno shaqada, waa inaan marka hore ogaannaa masaafada ay tahay, maadaama celceliska is-maamulku uu ku dhow yahay 50 kiiloomitir. Haddii masaafada ay ka badato 15 kiilomitir waa inaan ku qasban nahay dib uga fikir fikradda ama maal gasho moodel taasi waxay na siisaa ismaamul ugu badnaan, ismaamul ku xiran hadba noolaha wadada.
Qaybaha dayactirku waa shaqooyinka ugu badan ee aaladda noocan ah, haddii aan doorano in aan dhowrno yuuro oo aan lacagteenna ku aaminno soo saare wax yar la yaqaan ama aan adeeg farsamo ka haysan dalkeenna. Shimano ayaa suuqa ku jiray sanado badan, inkasta oo qaybta baaskiilada korantada ay ku yartahay, inkasta oo ay horeba noo siisay tiro badan oo moodallo ah. Noocyada kale ee waaweyn ee bixiya kalsoonida guud ee suuqa baaskiilka, koronto ama maaha, waa Trek, Takhasus, Haibike, Scott ...
Haddii aan ka hadalno matoorrada korontada ee noocan ah baaskiil, mid ka mid ah qaybaha ugu muhiimsan, shirkadda Jarmalka ee Bosch waa astaan ​​adduun ka sokow inuu ka mid yahay hormuudka arimahan. Panasonic, Brose iyo Shimano Steps waa soosaarayaal kale oo sidoo kale bixiya matoorro koronto ku shaqeeya. Mid ka mid ah waxyaabihii ugu dambeeyay ee la soo kordhiyay waxaa ka mid ahaa shirkadda Yamaha ee laga leeyahay Japan, oo ah shirkad inkasta oo ay muddo laba sano ah ku jirtay suuqa elektaroonigga ah ay mishiinadeeda ku uruurineyso Haibike, Lapiperre iyo BH Emotion.
Baaskiilada korantada ee u dhexeeya 500 iyo 1000 euro
Sunray 200 - Baaskiil dalxiis koronto ku socda
Baaskiilkan socdaalka ah ee ka socda Sunray wuxuu na siinayaa qaab bir ah, oo ah giraangir cabirkiisu yahay 26 inji, hakin hore iyo bareegyo disc ah durbaanka gadaashiisa. Iyada oo la adeegsanayo nidaam gacan qabasho (PAS), ayay na siisaa mootada 250w, 3 qaababka caawinta baaliska, 36 v iyo 10 Ah batari. Is-maamulku wuxuu u dhexeeyaa 35 ilaa 70 kiiloomitir iyadoo kuxiran celceliska xawaaraha aan ku wareegno. Sunray 200 wuxuu leeyahay qiime qiyaastii ah 600 euro.
SUNRAY 200 baaskiil koronto
Moma - SHIMANO baaskiil dalxiis koronto - 26 «
Qaabka Moma ee Shimano wuxuu na siinayaa qaab aluminium ah oo miisaankiisu dhan yahay 20 kg, 36 v iyo 16 Ah baytari. Bandhigga LCD ee aan ku maareyn karno mashiinka korontada wuxuu na siinayaa heer kaalmayn ah oo ku saabsan heerarka 5, tilmaamaha xawaaraha, masaafada la safray iyo heerka batteriga. Waqtiga lacag-bixinta waa 4 saacadood, oo aan ku socon karno qiyaastii 80 kiiloo mitir a 25 km / h xawaaraha sare. Qaabka Moma ee Shimano wuxuu leeyahay qiime qiyaastii ah 800 euro.
Moma - SHIMANO 26 Inch Baaskiil Dalxiis Koronto
Moma - SHIMANO Baaskiil Baaskiil koronto - 20 «
Haddii baaskiilada leh 26-inch wheel ay aad kuugu weyn yihiin, Shimano wuxuu na siinayaa nooc yar oo ka sii qaadi kara oo leh taayirro 20-inji ah. Qaabkani wuxuu leeyahay a ismaamul gaadhaya ilaa 80 kiiloomitir oo culeyskiisu yahay 18 kg. Sida qaabka 26-inji ah, jidhku wuxuu ka samaysan yahay aluminium taas oo noo oggolaanaysa inaan helno xawaaraha ugu badan ee 25 km / saacaddii, oo wadarta madaxbannaanida ay tahay 80 km. 20-inji Shimano Moma wuxuu leeyahay qiime qiyaastii ah 700 euro.
Moma - SHIMANO 20 Inch Isku laabashada Baaskiilka Korontada
Teamyy 26 Inch Laabista Baaskiil Koronto
Baaskiilada buuraha sidoo kale waxay boos ku leeyihiin qaybta baaskiilka korantada. Teamyy wuxuu na siiyaa baaskiil 26-inji ah oo xawaarekiisu yahay ugu badnaan 30 km / saacaddii, oo laga sameeyay aluminium kuna habboon dadka isticmaala inta u dhexeysa 165 ilaa 185 sentimitir, maadaama kursiga lagu hagaajin karo 80 illaa 95 cm. Waqtiga lacag bixinta wuxuu udhaxeeyaa 4 ilaa 6 saacadood, taas oo na siisa ismaamul ka yar kan baaskiilada magaalada oo kuyaala inta udhaxeysa 45 iyo 55 km. Qaabkan ayaa leh Awood xamuul ka yar 200kg, oo leh awood ka yar 500 w iyo batteriga 36 v. Qiimaha ugu dhow ee qaabkani waa 760 euro.
Baaskiilada korantada ee u dhexeeya 1000 iyo 2000 euro
Cruiser - SHIMANO Baaskiil koronto - 26 «
Shimano's Cruiser waa baaskiil koronto ballaaran oo koronto leh oo leh astaamo ceelal taabasho koronto / caawiyaha baydalka. Wadarta culeyska qaabkani wuxuu ka sameysan yahay aluminium wuxuu gaaraa 26 kg, oo leh taayirro 26-inji ah. Batariga 36v 10.4 Ah wuxuu leeyahay Waqtiga lacag bixinta ee u dhexeeya 2 iyo 3 saacadood oo wuxuu na siinayaa awood ah 350 w. Waxay leedahay nidaam amni oo leh laba wicitaan, midna xawaaraha iyo kan kale oo batteriga lagu dalacayo. Qalabka dhexe waa Shimano M410E kan gadaalna waa Shimano TX35. Qalabka kabaalka waa Shimano TX.50-21. Qiimaha ugu dhow ee baaskiil buurta Shimano Cruiser waa 1.400 euro.
Baaskiilka korantada ee korantada ee loo yaqaan IC Electric
IC Electric Emax wuxuu ka sameysan yahay aluminium, labada bareeg waa faashad wuxuuna leeyahay fargeeto ganaax ah oo ah XCR. Batariga 36 v iyo 10 Ah wuxuu na siinayaa awood ah 250 wy ismaamul u dhexeeya 40 iyo 60 kiiloomitir. IC Electric Emax wuxuu leeyahay qiime qiyaastii ah 1.300 euro.
Baaskiilka korantada ee korantada IC Electric
Baaskiilada isku laabma sidoo kale waxay leeyihiin boos ka mid ah qiimadan. Iyada oo culeyskiisu yahay 20 kg, IC Electric Plume waa baaskiil isku laaban oo leh a ismaamul u dhexeeya 55 iyo 65 km, taas oo ay ugu wacan tahay 360 w iyo 11 Ah baytarigeeda taasi waxay na siineysaa awood dhan 250 w. Labada bareeg hore iyo gadaalba waa faashad, waxay leedahay gear-xawaare Shimano ah oo 7-xawaare ah mahadnaqidiisa darteed waxaan si fudud ugu qaadi karnaa tareenka dhulka hoostiisa mara, tareenka ama gaarigeenna. Qiimaha qaabkani waa 1050 euro.
Soo Iibso Baaskiil koronto koronto oo isku laaban IC
Baaskiilada korontada laga bilaabo 2000 euro
Haddii aan ka gudubno caqabadda 2.000 ee euro, suuqa waxaan ka heli karnaa tiro badan oo moodallo ah, dhammaantoodna loogu talagalay inay daboolaan baahiyo gaar ah.
Takhasus gaar ah Turbo Levo FSR
Shirkadani waxay na siisaa baaskiilado koronto ku shaqeeya oo lagu garto ku qariso batteriga tuubada hoose taasi waxay noo ogolaaneysaa inaan si deg deg ah u buuxino batteriga marka lagu daro inaan awoodno inaan bedelno dhibaato la'aan. Noocyada loo yaqaan 'Turbo Levo FSR' waxay ka samaysan yihiin aluminium ama kaarboon, waxayna leeyihiin turbo oo bixisa 15% ka batteri ka badan noocyada dhaqanka. Waad ku mahadsan tahay matoorka la habeeyay, nidaamka fardaha ayaa isla markaaba heli doona caawimaadda lagama maarmaanka ah markaan u baahanahay inta ugu badan iyo miisaanka miyir-qabka ah ee dhammaan qaybaha kala duwan.
Waad ku mahadsan tahay arjiga howlgalka Howlgalka waxaan ku xakameyn karnaa waqti kasta teknolojiyadda ay ku daydaan tusaalooyinkan. Bandhigga Waddada, oo laga heli karo dhammaan noocyada, ayaa na siiya xogta aan u baahan nahay inaan ogaano waqti kasta safarka aan qaadeyno. Thanks to Remote Trial waxaan si fudud ugu kala beddeli karnaa noocyada kala duwan annaga oo aan gacmaheena ka sii deynin xarkaha. Moodooyinka Takhasusyada Turbo Levo FSRs ayaa la heli karaa laga bilaabo 4.200 euro.
Shirkadda Brompton Electric
Baaskiilka korontada ee Brompton wuxuu na siinayaa kaalmada lagama maarmaanka ah markaan fuulno jiirada ama safar dheer ku galno dhul fidsan, la qabsiga qaabkeena raacida mahadnaq teknoolajiyad xasaasi ah. Nidaam isku laaban oo dhakhso leh, ayaan ku rari karnaa dhib la'aan tareenka dhulka hoostiisa mara, baska ama tareenka. Intaa waxaa dheer, iyada oo culeyskeedu yahay 13,7 kg, in ka badan 2,9 oo batteriga ah ayaa noqonaya mid ka mid ah moodooyinka ugu fudud suuqa.
Waad ku mahadsan tahay batteriga 300 w, waxaan ku socon karnaa xawaare dhan 25 km / saacaddii baaxaddiisu u dhexeyso 40 ilaa 80 km, iyadoo kuxiran culeyska isticmaalaha iyo nooca wadada. Miisaanka ugu badan ee ay taageerto waa 105 kg, oo ay ku jiraan qalabka. Ku Qiimaha korantada Brompton, oo bilaabi doona in suuq looga dhigo suuqa bilowga sanadka 2018, wuxuu u dhexeeyaa 2.800 ilaa 3.000 euro, waana qiimo qeyb ahaan qiil looga helayo tayada sheyga iyo sababta oo ah waxaa gebi ahaanba laga soo saaray Boqortooyada Ingiriiska.
Soo saaraha Scott, sida Takhasuska leh, wuxuu na siiyaa a noocyo kala duwan oo moodallo ah dhammaan dhadhanka iyo baahiyaha laga bilaabo 2.000 euro, dhammaantood oo leh awood 250 w oo na siisa caawimaadda lagama maarmaanka u ah waqtiga saxda ah. Waa in maskaxda lagu hayaa in baaskiiladaha soo-saarahaan loogu talagalay inay adeegsadaan baahiyaha isticmaalayaasha u baahan caawimaad dheeri ah waqti ka waqti si ay u gaaraan halka ay u socdaan.
Scott wuxuu na siiyaa moodallo kala duwan ka samaysan aluminium iyo kaarboon labadaba, bareegyada disc, Shimano iyo Syncros. Batarigu wuxuu ku dhuumanayaa sanduuqa iyada oo si dhakhso leh loo heli karo marka aan u soconno inaan ku dalacno. Haddii aad rabto inaad aragto dhammaan moodooyinka la heli karo waxaad aadi kartaa qaybta bogga internetka ee Scott loogu talagalay baaskiilada korantada halkaasoo aad ka heli doontid wax ka badan 30 nooc.
Shirkadda Haibike waxay kaloo na siineysaa seddex nooc oo ah nooca XDURO FullSeven Carbon: 8.0 oo qiimahiisu yahay 4.999 euro, 9.0 oo ah 6.999 euro iyo 10.0 oo lagu qiimeeyo 11.999 euro. Moodooyinkaas oo dhami waxay ka samaysan yihiin kaarboon, isku dar mashiinka Bosh oo bixiya a xawaaraha ugu badan ee 25 km / saacaddii mahadsanid mootada 250 w. Sida moodooyinka dhammaadka-dhamaadka badankood, batteriga ku jira moodelladani wuxuu ku yaalaa barta xagalka, taas oo noo oggolaanaysa inaan si dhakhso ah u helno oo aan ku dalacno ama ugu beddelo mid kale haddii loo baahdo.
Thanks to isticmaalka kaarboon, kaliya maahan dhismaha jir, laakiin sidoo kale inta badan qaybaha kala duwan ee ka tirsan mootada, culeyska iyo booska ay qaadanayaan si aad ah ayaa loo dhimay marka loo eego moodooyinka kale. Cabbirka giraangiraha waa 27,5 inji dhammaan noocyada, wuxuu leeyahay bareegyo diskiga ku shaqeeya oo xagga hore iyo xagga dambe ah iyo xeedho ay bixiso soo saaraha waa nooca ugu dhakhsaha badan, si aan waqti ugu lumino sida ugu macquulsan ee aan dib ugu soo ceshano batteriga baaskiilkeena korantada.
Websaydhka Haibike waxaad ka heli kartaa dhammaan moodooyinka baaskiilada korantada iyo waxa loo arko mootooyinka korantada, oo gaadhaya xawaaraha ugu sarreeya ee 45 km / h, kaas oo rWaxay ubaahantahay caymis iyo laysanka darawalnimada sidaan kor uga faallooday.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » qalabka » Baaskiilada korantada ugu fiican